Digby: vingkwọ Azụmaahịa Obodo na Ngwa Egwu | Martech Zone
Ọ bụ nkwenye m na ederede dị na mgbidi na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa ugbu a na-etinye ego dị mkpa na atụmatụ ekwentị. Mobile abụrụla isi maka nyocha ndị ahịa na ịzụrụ omume. Jikọtara na oke doro nke smartphones, e nwere obere obi abụọ banyere mmetụta mobile ga-na afọ na-abịa. Digby na-enye SDK ebe ngwa mkpanaka nke ndị na-ere ahịa nwere ike itinye ngwa ngwa geofencing - mee ka ngwà ngwà ahụ jiri ọnọdụ Digby dabere nchịkọta na ikike ahia.
Site na Digby Localpoint ™ Mobile Platform, nke gunyere Analytics, Outreach, Venue, na Storefront, Digby na-enyere teknụzụ dabere na ọnọdụ iji kwe ka ụdị dị iche iche nwee ike ịba uru dị mma, ozi echebara ọnọdụ ma na-adọta, mmetụta, ma nwee mmekọrịta ha na ndị ahịa ha n'ofe. ọwa niile - ha niile site na ahụmịhe amamịghe nke aka ha.
Mgbasa ozi mpaghara - Ndị ahịa nwere ike ịbụ ụzọ dịpụrụ adịpụ na azụmaahịa gị kacha mma ma amataghị ya. Kedu ihe kpatara ị ga - eji gafere mgbe ị nwere ike ịgbatị aka ma dọrọ ha gaa n'ụlọ ahịa site na ịgwa ha okwu site na ngwa mkpanaka gị? Digby Localpoint Outreach na enyere gi aka ime njikota a na otutu ihe di omimi nke ike-ahia amara nke oma emere maka aka.
Mpaghara Obodo - Smartphone nyeere ndị ahịa nwere ike ịlele ọnụ ahịa ndị asọmpi mgbe ị na-eje ije n'akụkụ wara wara gị. Banye na mkparị ahụ site na ịnye ahụmịhe ejiri akara nke aka gị nke na-akpali uru, itinye aka na kaadị iguzosi ike n'ihe kachasị. Digby Localpoint Venue na-enye gị ohere ịnwe aka ịzụ ahịa na ụlọ ahịa na ngwa ọrụ dị ike iji gwa, nye aka, ma gbaa ndị ahịa jikọtara aka oge na ebe ọ kachasị mkpa.
Nchịkọta mpaghara - Ihe karịrị 90% nke ego ndị na-ere ahịa na-abịa site na ụlọ ahịa mana obere oge ugbu a gbasara ndị ahịa nchịkọta n'ime ụlọ ahịa. Digby Localpoint Analytics na enye gi ohere ichoputa udiri web nchịkọta maka ọnọdụ anụ ahụ gị na data bara uru gbasara otu esi azụ ahịa ahịa ahịa na mgbe ndị ahịa gị gara, na-enye gị ohere ịmụtakwu banyere ha iji jeere ha ozi nke ọma.
Mpaghara Storepoint - Ndị ahịa na-achọ ka ọchụchọ gị mara, na-agagharị na ịzụta ahụmịhe mkpanaka ga-atọ ụtọ, na-adaba adaba ma baa uru na ntinye na ọdịnaya. Digby Localpoint Storefront na-enye gị ohere ịmepụta ahụmịhe pụrụ iche, nke ịzụ ahịa na-enyere aka ịzụ ahịa ma kpalie ma gwa ndị ahịa gị site na ngwa mkpanaka gị ama ama na weebụsaịtị kachasị mma.
Tags: androiddigbydigby localpointgeofencingiphonempaghara mobileebe maaramobile nyochamobile sdk